အကောင်းဆုံးအာကာသ Selfies [RANKER] - သတင်း Rule
အကောင်းဆုံးအာကာသ Selfies [RANKER]
ယနေ့ရပ်တည်အဖြစ်, လူတိုင်း selfie ပြီ – ပင်သင်၏အဘွား. နှင့်သင်၏အဘွားရဲ့ selfies ဖြစ်စေခြင်းငှါသကဲ့သို့အေးမြသော, သူတို့အာကာသယာဉ်မှူးများနှင့်အထူးသဖြင့်မအင်္ဂါဂြိုဟ် Rover selfies ယူ space ကို selfies မှတက်သီးနှံများကိုပုံဘယ်တော့မှ.
သူတို့မသာလူ့ရှာဖွေရေး၏အနံကိုပြသသောကွောငျ့အာကာသယာဉ်မှူး selfies အထူးသဖြင့်ဖှယျများမှာ, သူတို့လည်းသင်မည်မျှတစ်ဦး egghead ၏နေပါစေပြသ, လူတိုင်း selifes ယူပြီး likes. ပို. ပင်အမှတ်ဖို့, ထိုအင်္ဂါဂြိုဟ် Rover ရဲ့ selfies စက်မှုနဲ့အနုပညာအလှတရား၏ဥပမာ.
သင်တို့ကဲ့သို့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရှုသည့်အခါတိုင်းသင်သည်အဘယ်သူ၏ heartstrings ဆွဲထုတ်နေကြတယ်တစ်စုံတစ်ဦးအနေဖြင့်ဖြစ်စေမ WALL-E ကို, အနည်းငယ် rover selfies ကိုမွငျလြှငျသငျသညျယောဟနျသက F ကြောင်းယုံကြည်စေမည်. သူကငါတို့လကိုမှသွားသင့်တယ်ဆုံးဖြတ်သောအခါကနေဒီအရာတစ်ခုခုပေါ်ခဲ့သည်.
← ဦးနှောက်ခွဲစိတ်လူနာတွေကိုအကဲမှတစ်ဦး Cooler Way ကို Raspberry Pi 3: ကုန်ကျသော Credit Card ကို-size 1.2GHz ကို PC $35 →